Sameecadaha dhagaha: Muusikada muusikada oo ka socota YouTube iyo Reddit | Laga soo bilaabo Linux
Isbedelka isticmaalka waxyaabaha ku jira qaabka qulqulka sanad walba waxay noqoneysaa mid caan ah, hadana waxay lajirtaa saameynta go'doominta iyo kala fogaanshaha bulshada ee Cudurka caalamiga ah covid-19, xitaa intaas ka sii badan.
Iyo berrinkii muusikada lagu cunay khadka tooska ah, YouTube, waxaa loo qaadan karaa a maktabada muusikada ee aan xadidneyn. Taasina waa sababta ay aad iyo aad u badan codsiyo (ciyaartoy) loogu abuuray internetka ama desktop si ay u cunaan waxyaabaha muusikada ku jira internetka, sida «Dhagaha.
Beerta muusigga by ka soo maraya YouTube gaar ahaan, «Dhagaha waxay u taagan tahay nal, fudeyd iyo shaqeyn Ciyaaryahan muusig ah oo lagu sii daayo.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan quusin «Dhagaha Waxaa habboon in la ogaado in, munaasabadaha kale, aan ka soo hadalnay arrimo kale ciyaartoy muusig oo la mid ah, taas oo ah, ilaha ay ka kooban tahay qadka tooska ah ee internetka, sida "Nuclear", oo aan si kooban ugu qeexnay fursaddooda sida soo socota:
"Nukliyeerku waa muusig muusig isdabajoog ah oo lagu sameeyay GitHub iyada oo loo marayo liisanka "Affero GPL", iyo hoosta falsafada horumarinta ee loo yaqaan "GNU / Linux First", taas oo macnaheedu yahay in dalabku ixtiraamayo xorriyadeenna, wuxuu na siinayaa helitaan buuxa ee koodhka isha, sidaas darteed in aan wax ka beddeli karno oo aan ku biirin karno mashruuca. Erayada rasmiga ah ee loogu talagalay barnaamijka boggeeda rasmiga ah ayaa lagu akhrinayaa in Nuclear-ka uu yahay Muusig Casri ah oo Muusig ah oo diiradda lagu saaray qulqulka noocyada bilaashka ah." Nukliyeer: Ciyaaryahan muusig oo hoorto ah
Kuwa kale ee xiisaha lihi waa:
1.1 Waa maxay Dhagaha
1.3 Soo dejiso, rakibid iyo shaashad
Waa maxay Dhagaha
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, waxaa si kooban loogu sharaxay sida soo socota:
"Sameecadaha dhegaha waa muusig miyuusig oo ku shaqeeya YouTube iyo Reddit."
Si kastaba ha noqotee, gudaha bogga GitHub si buuxda ugu sharax sida soo socota:
"Headset waa muusig fudud oo loogu talagalay Mac, Windows, iyo Linux oo leh raadinta YouTube-ka, shaashad guri oo leh liis caan ah noocyo iyo waqtiyo, iyo tan ugu fiican oo dhan, raadiye ku shaqeeya Reddit. Sameecadaha dhagaha ayaa qaata heeso ay wadaagaan in kabadan 80 muusig oo muusig yar ah, iyaga ayaa kalaqaada, oo si toos ah ugu ciyaara Waa hab qabow oo aad u qaas ah oo lagu helo muusig cusub maadaama ay doorteen bini-aadamka kale ee adiga oo kale ah oo aan lagu dooran algorithms."
Waa qaab-dhismeed badan: Waxaa loo heli karaa Windows, Linux (Debian, Redhat) iyo MacOs. Xitaa waxaa laga dhisi karaa koodhka ilaha ee jawi caadiya.
2 Mawduucyo muuqaal ah oo la heli karo: Waxay leedahay 2 mowduuc oo muuqaal ah: Mugdi iyo Iftiin. Dhawaanna waxay kudarsan doontaa kuwiisa gaarka ah iyo kuwa shaqsiyadeed.
Is dhex galka Last.fm: Kuu ogolaanayaa is-dhexgal hal-guji ah oo leh adeeg muusig bulsheed caan ah. Ku dhex wareeji heesaha la heli karo oo sii ikhtiyaar aad ku saxdo macluumaadka.
Xiriirro gaar ah oo ammaan ah: Wuxuu ballan qaadayaa in dhammaan xogta, cadeymaha iyo buskudka lagu kala qaado iyada oo loo marayo isku xirnaanta SSL oo aamin ah, si loo ilaaliyo dhammaan xogta aan laga arki karin shabakadda.
Il furan: Si loo hubiyo nabadgelyada iyo xasilloonida, qayb weyn oo ka mid ah isha Dhagaha ayaa furan.
Isku-darka dariiqa: Wax walba oo la maamulo waxay ku jiraan daruuraha, markaa kaliya markaad gasho, muusikada la maareeyay oo dhan ayaa soo noqday. Si loo waafajiyo barnaamijka koontada isticmaalaha YouTube ee isticmaale, waxyaabaha soo socda waa in la raaco nidaamka.
Soo dejiso, rakibid iyo shaashad
Nooca ugu dambeeya ee hadda jira ayaa ah lambarka 3.3.0 iyo ka dib markii la soo dejiyey, kiiskeena gudaha qaab ".deb", oo lagu rakibay "Apt" ama "dpkg", «Dhagaha waxay u egtahay sidan:
Shakhsiyan, aad baan ujeclahay, maxaa yeelay aniga iska ilaali inaad maqasho nasashooyinka xayeysiinta, ka kooban ma aha oo kaliya muusikada, laakiin ka kooban wixii ka mid ah YouTube, tusaale ahaan, Kanaallada Barnaamijka Bilaashka ah, Ilaha Furan iyo GNU / Linux taas oo aan inta badan arko. Iyo dhammaan looma baahna in la soo galo dalabka, taas oo loo baahan yahay oo keliya haddii ay dhacdo in qof uu doonayo inuu isticmaalo menu menu iyo xulashooyinka xiriirada y kooxaha.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Headset», yar oo waxtar leh muusigga waxyaabaha ku jira internetka ee YouTube iyo Reddit, ilo furan iyo qaab-dhismeed ballaadhan, oo noo oggolaanaya, waxyaabo badan, in laga boodo carqaladeynta xayeysiinta; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Sameecadaha: Muusigga muusikada oo ka socda YouTube iyo Reddit